Muxuu Gaas ka yiri xiisadda degmada Beledxaawo? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu Gaas ka yiri xiisadda degmada Beledxaawo?
Muxuu Gaas ka yiri xiisadda degmada Beledxaawo?
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) oo bixiyey wareysi cusub ayaa si adag uga hadlay xiisada gobolka gobolka Gdo, gaar ahaan dagaalkii xooganaa ee ka dhacay Beledxaawo.
Gaas ayaa marka hore colaadaasi ku dhaliilay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) iyo hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Sidoo kale wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in si macno darro loo daadiyo dhiiga dadka shacabka ah ee lagu dul dagaalamayo.
Cabdiweli Gaas oo hore ra’iisul wasaare uga soo noqday dalka ayaa lagu baaqay madaxweyne Farmaajo & Axmed Madoobe inay ka heshiiyaan xiisada Gedo.
Si kastaba arrinta Gedo ayaa noqotay xudunta khilaafka xoogan ee xilligan ka jira dalka, waxayna sidoo kale saameyn ku yeelatay hore u socodka doorashada dalka ee 2021-ka.